Factory Tour - Shandong Zhongtian hwoupenyu Material Co., Ltd
GI-kwakakurudzira simbi coils
GL-Galvalume simbi coils
PPGI-Prepainted simbi coils
PPGL-Prepainted simbi coils
Corrugated nemakadhibhokisi papepa
Cold akakungurusa Steel Workshop
Cold akakungurusa Coils anobudiswa kumusoro nokukurumidza 6Hi rinopfungaira zvigayo zviri sopplied nesu zvose zvizere nesimba uye annealed condition.Superior pamusoro unhu chando Coils kubvumira yakafara chikumbiro sezvo substrate kuti simbi unhani (kwakakurudzira) galvalume, mbishi mashoko nyere, sepombi, dhiramu / musuo / simbi fenicha uye zvimwe zvayo ouinjiniya anoshandisa.
Hot vakanyika Galvalume simbi Workshop
Galvalume simbi coils chibereko riri chaizvo zvakafanana kwakakurudzira simbi asi nani ngura kuramba (kusvika 3 nguva upenyu kwakakurudzira) isu takanzwa pamurayiro supperior ehupfumi kuti galvalume simukai kubva rakasiyana nziyo (43.5% Zn, 1,5% Si, 55% AL ) ari esimbi unhani. Mafomu zvinosanganisira nemakadhibhokisi chawo mashoko pre-painting.
Hot vakanyika kwakakurudzira simbi Workshop
Kwakakurudzira Steel Coils anobudiswa kuburikidza inofanira nesimbi unhani kunosanganisira kupfuura chando ndokukungurusira Coils kuburikidza muhadyana chine zingi wakaumbwa. Izvi chendangariro adhesion pakati zingi kusvikira pechiso simbi pepa. The zingi rukoko inopa wakanaka ngura nemishonga uye Kurebesa upenyu basa. Hot Dip kwakakurudzira zvigadzirwa vari zvinowanzoshandiswa mhuri midziyo yemagetsi, zvekufambisa, mudziyo kugadzira, nemakadhibhokisi, nechigadziko mashoko pre-painting, ducting nezvimwe kuvakwa ukama mafomu.
Color zvemapuranga simbi Workshop
Pre-akapendwa Coils anobudiswa neZvapupu yokunamisa marongera wependi pamusoro pemvura chando anokungurutsirwa, kwakakurudzira kana galvalume Coils. Aesthetic nyaya uye mukurumari ndiwo anokosha zvinhu ruvara zvemapuranga simbi Coils. A akasiyana vakasarudzwa mavara hunowanika mutengi uye pendi hwaiitirwa chaizvo magumo kushandiswa raigona kutaurwa. Coils edu pre-kupendwa vari akakodzera zvakananga mukati uyewo kunze chikumbiro, sangweji ukomba uye zvichingodaro.
Corrugation Workshop-Corrugated Roofing papepa
Warehouse uye ainge atumirwa